HCC: HIFARANA ANIO NY FANDRAISANA NY FITARAINANA MOMBA NY VOKA-PIFIDIANANA
On nov 20, 2018 32 075
Hifarana anio ny fandraisan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana na ny HCC ny fitarainana momba ny voka-pifidianana. Amin’ity herinandro ity no daty voatondro mety hamoahany ny vokatra ofisialy. Marihina fa manana sivy andro taorian’ny namoahan’ny CENI ny vokatra vonjimaika ny Fitsarana avo.
Etsy ankilan’izay, miomana sahady amin’ny fihodinana faharoa ny Komity mpanohana ny kandida faha-25, Ravalomanana Marc. Misy ny antsoy avo hataon’izy ireo amin’izay vonona ny hifanome tanana. Efa am-perinasa ny K25.
Andaniny kosa, nanao fanambarana ny kandida faha-13, Rajoelina Andry, omaly. Miandry ny vokatra avy amin’ny HCC izy saingy mangataka ity farany mba hijery akaiky ny fitarainana nataony. Izy rahateo mbola manitsokisoka ny tsy fahatomombanan’ny fanisam-bato teo anivon’ny Ceni ka tsy manaiky ny fanodikondinana ny vatony.
Ny eo anivon’ny Ceni izay efa miomana amin’ny fiatrehana ny fihodinana faharoa. Nilaza ny mpitondra tenin’ity andrimpanjakana ity, Fano Rakotondrazaka, fa miandry ny famoahan’ny HCC ny vokatra ofisialy dia miasa.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : UN SECOND TOUR SELON LES RESULTATS PROVISOIRES DE LA CENI
YMCA MADAGASCAR: MAMPIOFANA NY TANORA HO OLOM-BANONA